Ntuziaka Anọ Maka Ọdịnaya Weebụ Na-agụ | Martech Zone
Ịgụ ihe bu ikike nke ogugu mmadu ma ghota ma cheta ihe o guru. Ndị a bụ ụfọdụ ndụmọdụ iji melite ọgụgụ, ngosi, na nkwupụta nke ederede gị na weebụ.
1. Dee maka Weebụ
Agụ na web adịghị mfe. Ndị na-ahụ maka kọmputa nwere obere mkpebi ngebichi, na ọkụ ha na-atụ na-eme ka anya anyị nwee ike ọgwụgwụ. Na mgbakwunye, ọtụtụ weebụsaịtị na ngwa na-ewu site na ndị na-enweghị ọzụzụ ọ bụla na nka ihe ederede ma ọ bụ eserese eserese.
Ndị a bụ ụfọdụ ntụle iji tụlee n'oge usoro ederede:
The nkezi ọrụ ga-agụ ma ọ kachasị 28% nke okwu na ibe weebụ, ya mere mee ka okwu ndị ị gụrụ guo. Ntuziaka anyị na-atụ aro nye ndị ahịa anyị na Tuitive bụ ịkpụpụ oyiri gị na ọkara, wee belata ya na ọkara ọzọ. Anyị maara na nke a na-eme ka mkpu gị n'ime-Tolstoy, mana ndị na-agụ akwụkwọ gị ga-enwe ekele maka ya.
Jiri okwu doro anya, nke doro anya, na nke mkparịta ụka.
Zere "ahịa", ederede na-etu ọnụ gabigara oke nke na-ejuputa mgbasa ozi ọjọọ ("Ọhụrụ Ngwaahịa Ọhụrụ!"). Kama, nye ha ozi bara uru ma kpọọ aha.
Mee ka paragraf dị mkpụmkpụ, ma were onwe gị otu echiche na paragraf.
Jiri mpụta anatara
Jiri ederede ederede-pyramid nọdụ, na-edebe ozi kachasị mkpa gị n’elu.
2. Hazie Ọdịnaya Gị na Sub-headers
Sub-headers dị ezigbo mkpa na ikwe ka onye ọrụ gbasaa peeji nke ọdịnaya anya. Ha na-ekewa ibe ahụ gaa na ngalaba nwere ike ịkọwapụta ma kwupụta ihe ngalaba nke ọ bụla bụ maka. Nke a dị mkpa nye onye ọrụ na-enyocha peeji ahụ na-achọ ịchọta ihe kachasị mkpa.
Sub-nkụnye ndị eji isi mee na-emepụta a visual eruba na-enye ohere ka ndị ọrụ na-akpali ha anya ala gafee ọdịnaya.
Gbalịa ịmachi akụkụ nke ibe weebụ gị (ewepu igodo, ụkwụ, wdg) na nha atọ: aha peeji, isiokwu dị n'okpuru, na nnomi ahụ. Mee ka ọdịiche dị n'etiti ụdị ndị a doo anya ma dị irè. Obere ọdịiche dị na nha na ibu ga-eme ka ihe ndị ahụ meghee kama ịrụkọ ọrụ ọnụ.
Mgbe ị na-ede ihe, gbaa mbọ hụ na okpuru isi ederede tinye isi ihe ederede ha na-anọchi anya obere mkpụrụokwu, echekwala na onye ọrụ agụchaala akụkụ dị n'elu ma ọ bụ n'okpuru. Zere iwe mara mma ma ọ bụ okwu amamihe; doo anya bụ oké egwu. Isi isiokwu ndị nwere isi ma baa uru ga-eme ka onye na-agụ ya tinye aka ma kpọọ ya ka ọ gụọ ya.
3. Jiri Ederede ederede
Ọ gbasara. Iji maa atụ, akpaokwu ahụ “Agwara m gị na m hụrụ a enwe”Nwere ihe dị iche ọ pụtara karịa“ M gwara i huru enwe ”.
All okpu: Ndị mmadụ na-agụ site na ịkpụzi okwu dị iche iche karịa ịgbakọ mkpụrụedemede site na mkpụrụedemede. N'ihi nke a ederede dị na ALL CAPS siri ike ọgụgụ maka na ọ na-emebi ụdị okwu anyị na-ahụbu. Zere iji ya ogologo akụkụ nke ederede ma ọ bụ ahịrịokwu zuru ezu.
Bold: Obi ike nwere ike ime ka akụkụ ederede gị pụta ìhè, mana gbalịa ịghara iji ya mee ihe n'ụzọ gabigara ókè. Ọ bụrụ n ’ị nwere nnukwu ederede ederede ekwesiri imesi ike, gbalịa iji agba dị n’azụ kama.
4. Oghere Dị Njọ Pụrụ Ohbụ Oh-Ya mere-Ezi
Oghere kwesịrị ekwesị n’agbata ahịrị ederede, n’agbata mkpụrụedemede, na n’agbata akwụkwọ nwere ike ịme ka ọgụgụ ọgụgụ na nghọta dịkwuo ukwuu. Oghere a na-acha ọcha (ma ọ bụ “na-adịghị mma”) bụ ihe na-eme ka ndị mmadụ nwee ike ịmata otu mkpụrụedemede na nke ọzọ, na-ejikọ ibe ederede na ibe ha, ma na-agbaso ebe ha nọ na ibe.
Ka ị na-ele anya na peeji a, gbasaa ma mechie anya gị ruo mgbe ederede na-enweghị nghọta. Peeji ahụ ọ na-ekewa nke ọma na ngalaba? You nwere ike ịgwa onye isi ihe nkebi nke ọ bụla bụ? Ọ bụrụ na ọ bụghị, ị nwere ike ịmalitegharị imewe gị.
Ole Ndị Amụ na-agụ? nke Jakob Nielsen dere
Etu aga-esi dee Subheads Atọ Ọma nke Brian Clark dere
Prinkpụrụ 10 Maka Readdị Web Typography nke Matt Cronin dere
Tags: content Marketingogugunke ogugu
Banyere Nzukọ Gị Ọzọ
Jul 5, 2011 na 10:17 PM
Nnukwu ọdịnaya ebe a! Otutu mgbe, ihe ekwuru nke oma kariri na otutu ihe, ikwu okwu ojoo. Otu n’ime akwụkwọ ndị kasị amasị m bụ “Emela Ka M Na-eche.” n'ihi ụfọdụ n'ime otu ihe ndị mere ka akaebe ebe a.